Nahilik’i Aostralia ary Nomelohina Higadra ao Indonesia, Manohitra ny Fiainana Tsy Antany Tsy Amparafara Ny Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2018 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, Ελληνικά, Italiano, English
Fihetsiketsehan'ny mpitsoa-ponenana. Sary avy amin'i Asif Rahimi
Tanora marani-tsaina 28 taona i Asif. Na dia teo aza ireo olana rehetra nateraky ny fiainana tao amin'ny firenena rotiky ny ady tahaka an'i Afganistana, nahavita nianatra momba ny Fifandraisana Iraisampirenena tao amin'ny Oniversite Kabul izy ary nanjary nahafehy fiteny efatra, izay ny tenany ihany no nampianatra ny fiteny sasany.
Tamin'ny fotoana sy toerana samihafa, tanteraka tamin'i Asif mora foana izay iriany – mpampianatra, diplaomaty – saingy tsy amin'izao fotoana izao, ary tsy any amin'ny toerana izay noterena hijanonany.
Efa-taona lasa izay, nanapa-kevitra ny handao an'i Afghanistan i Asif, rehefa nahita fa miha-mikorontana isan-taona ny toe-draharaha ao. Niala izy ary manantena hihazo an'i Aostralia, toerana hanombohana fiainana vaovao lavitry ny ady. Nandritra ny diany, hitany fa bevohoka ny vadiny. Tonga tany Indonezia izy tamin'ny farany, ary iray volana taty aoriana, raha notazonina tany am-ponja izy, lasa rain'ny zazavavy kely tsara tarehy izay tsy mba afaka nihaona taminy mihitsy. Saingy tsy mpanao heloka bevava i Asif – mpitsoa-ponenana nogadraina nandritra ny efa-taona lasa tao amin'ny fonjaben'ny fifindramonina tany Balikpapan, Indonezia, niaraka tamin'ny olona 183 hafa izy.
Fonjaben'i Balikpapan – Sary avy amin'i Asif Rahimi
14 ka hatramin'ny 62 taona ireo gadra, ahitana olona avy any Somalia, Iran, ankoatra ny firenena hafa. Ny 181 amin'ireo voafonja dia Afghana Hazaras, vondrona ara-poko izay efa nokendren'ireo Taliban nandritra ny folo taona, ary ankehitriny kendren'i Daesh indray.
Tranobe voahodidina fefy tariby elektrika ny tobim-pamonjana Balikpapan, natokana hanagadràna ireo olona voampanga tamin'ny heloka bevava, toy ny fanondranana olona, ​​zava-mahadomelina, sy ny fijirihana an-tserasera izy tany am-boalohany. Tsy mahazo mianatra na miasa ireo voafonja Balikpapan, ary tsy mahazo fitsaboana ampy. Anisan'izany ohatra, fara fahakeliny ny tanora iray, sy olon-dehibe maro izay mila fitsaboana maika.
13 ireo foibem-pamonjàna fifindra-monina any Indonezia, izay mahazaka gadra 1300. Matetika maloto, hipoka olona sy mora tratran'ny tondra-drano mandritra ny vanim-potoanan'ny orana ireo foibem-pamonjana ireo. Hatramin'ny 17 janoary 2018, manohitra ireo fepetra ireo ny mpitsoa-ponenana ao amin'ny tobim-pamonjana ao Balikpapan.
Novatsian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny Fifindra-monina (FIF) ara-bola ny fanavaozana sy ny fanitarana ny toeram-pamonjana, mampiasa famatsiam-bola avy amin'ireo sampan-draharaham-panjakana Aostraliana maro. Nanameloka ity “Vahaolana Indoneziana” ity ireo fikambanana tsy miankina Aostraliana, milaza fa mandoa vola “an-jatony tapitrisa dolara ho an'i Jakarta ny governemantany mba hanagadrana sy hametrahana ireo mpangataka fialokalofana. Mamela ireo mpifindra monina mba hotazonina hatramin'ny 10 taona tsy misy fandinihana ara-pitsarana ny lalàna Indoneziana.
Na dia tsy fikambanana mpanao asa soa aza ny FIF ary tsy manam-pahefana hanampy ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoa-ponenana, miantso ireo mpitady fialokalofana sy mpitsoa-ponenana mba ho ampiany ireo manampahefana Indoneziana misahana ny mpifindra monina na ny UNHCR. Any Indonezia, nanampy tokoa an'i Aostralia tamin'ny fitantanana ny fanarahamaso ny sisintaniny ny FIF, saingy lavitry ny tranga tokana izany izay toa mhanohitra ny lafiny maro amin'ny asa ataon’ny fikambanana. Notsikerain’ireo mpikaroka ny FIF noho ny fandraisany anjara amin'ny asa soa sy ny tetikasa mampiady hevitra any amin'ny faritra samihafa manerana ‘izao tontolo izao. Any Libya, firenena iray mbola eo am-piarenana noho ny korontana taorian'ny fidirana an-tsehatry ny tafika tarihin'ny OTAN tamin'ny taona 2011, nahazo folo an-tapitrisa dolara ny FIF mba hanohanana rafitra iray natao hanakanana ny olona tsy hiala ho any Eoropa.
Tsy nankatoa ny Dina na ny Fifanarahana momba ny Mpitsoa-ponenana tamin'ny taona 1951 i Indonezia, ary tsy manana fifanarahana momba ny zon'olombelona i Azia Atsimo-Atsinanana. Vokatr'izany, miankina amin'ny UNHCR ny fangatahana fialokalofana, izay manome taratasy fankatoavana ny olona sy ny fianakaviana ho toy ny mpitsoa-ponenana.
Saika ny olon-drehetra migadra ankehitriny ao Balikpapan no nahazo fialokalofana avy amin'ny UNHCR, saingy tsy mamela azy ireo ankatoavina ho mpitsoa-ponenana ny lalàna indoneziana.
Araka ny tatitry ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona:
Na dia eo aza ny fankatoavan'ny UNHCR, tsy manana hoavy azo iainana any Indonezia ny mpitsoa-ponenana. Tsy manana sata ara-dalàna eo ambanin'ny lalàna Indoneziana izy ireo, tsy afaka miasa ary voafetra ny fahafahana miditra amin'ny fanabeazana (…) Tena mafy indrindra ho an'ny ankizy ny fiantraikan'ny fitazonana am-ponja maharitra sy tsy misy fetra, maro amin'ireo ankizy no miaina ratram-po, rari-tsaina na fahakiviana. Ny ankamaroan'ny ankizy tsy misy mpiaraka dia voatazona miaraka amin'ny olon-dehibe tsy misy ifandraisany amin'izy ireo ka mety iharan'ny herisetra na fanararaotana ireo ankizy ireo. Tena mafy ny toe-javamisy ho an'ny ankizy izay voatazona tsy ara-drariny any am-ponja mandritra ny volana na taona maro sy ao anatin'ny fepetra mahatsiarivana, ary tsy mahafantatra hoe hafiriana no hanagadrana azy ireo.
Tahaka ireo olona ao amin'ny fonjan'ny fifindramonina ao amin'ny nosy Nauru sy Manus, ao Aostralia, mijanona ho voakendaroroka ireo mponin'i Balikpapan – voakendaroroky ny fahatsapana fanoherana mpifindra monina sady voakendaroroky ny mpanao politika maniry ny hampiasa izany fahatsapana izany mba hahazoana vato.
19 Mey 2020Azia Afovoany sy Kaokazy
Afghanistana, tsy afa-bela amin'ny ady na dia ny zaza vao teraka any amin'ny hôpitaly aza
15 Avrily 2020Azia Afovoany sy Kaokazy
Nahafaty olona ny COVID-19 tany Afghanistan